Sobordinatianisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Sobôrdinatianisma)
Ny sobordinatianisma na sobordinasionisma dia firehana teolojika kristiana izay mampianatra ny maha ambany fahefan'ny Ray an'i Jesosy sy ny Fanahy Masina. Ambany fahefan'ny Ray i Jesosy noho izy noforonin'ny Ray ary noho ny Ray izay sady tsy nateraka no mihoa-draha.
2 Fandrosoan'ny soborditatianisma
3 Fanamelohana ny sobordinatianisma
4 Jereo koa :
Ny teny hoe sobordinatianisma sy sobordinasionisma dia fanagasiana ny teny frantsay hoe subordinatianisme sy teny anglisy hoe subordinationism sady avy amin'ny teny hoe subordination izay midika hoe "fahambany fahefana".
Tamin'ny voalohany dia nenti-niady tamin'ny politeisma (fivavahana amin'andriamanitra maro) izay nahiahina ho voizin'ny teolojia vaovao, indrindra ny diteisma (fivavahana amin'andriamanitra roa), no nampandrosoana izany teolojia izany. Nampianatra ny sobordinatianisma ny rain'ny Fiangonana toa an'i Origenesy sy ireo firehana tsy nanaraka ny fampianarana ny Trinite andalam-piforonana sady mbola tsy fantatra.
Niely nanomboka tamin'ireo taona voalohandohan'ny nisian'ny fivavahana kristiana izany fampianarana izany. Maro ny endrika nisehoan'ny sobordinatianisma teo antenantenan'ny taonjato faha-4. Tsy manao an'i Jesosy ho Andriamanitra ny mpomba ny sobordinatianisma ka mifanakaiky tanteraka amin'ny arianisma na endrika isehoan'ity farany izany.
Fanamelohana ny sobordinatianismaHanova
Tamin'ny taona 381 dia nanameloka ny arianisma amin'ny endriny rehetra, isan'izany ny sobordinatianisma, ny konsily tao Konstantinopolisy.
Jereo koa :Hanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobordinatianisma&oldid=978525"
Dernière modification le 17 Desambra 2019, à 05:25
Voaova farany tamin'ny 17 Desambra 2019 amin'ny 05:25 ity pejy ity.